अमेरिका मा Resettlement | यो शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
अमेरिका मा Resettlement
तपाईं अमेरिका मा एक शरणार्थी छन् के?
जब तपाईं पहिलो संयुक्त राज्य अमेरिका मा आइपुग्दा, तपाईं विमानस्थलमा आफ्नो resettlement एजेन्सीको स्वयंसेवकहरु द्वारा शायद अभिवादन गरिनेछ. तिनीहरूले आफ्नो घर गर्न हुनेछ. तपाईं मदत छ कि संगठन मात्र तपाईं बाँच्न ठाउँ पाउन पैसा को एक सानो राशि छ. यो घर सानो हुन सक्छ अर्थ र केवल यसलाई केही कुराहरू हुन सक्छ. अमेरिकी परिवार शायद घरेलू वस्तुहरू दान, यस्तो सुत्ने र तालिका रूपमा, आफ्नो घर को लागि.
तपाईं कसरी आफ्नो घर मा नयाँ वस्तुहरू प्रयोग गर्न सिक्न हुनेछ - उदाहरणका लागि, तपाईँको फ्रिज, माइक्रोवेव र लुगा धुने मेसिन. यो पृष्ठमा आधारभूत सीपहरू तपाईंले यी वस्तुहरू कसरी प्रयोग गर्न सिक्न मदत जानकारी छ. तपाईंले यो पृष्ठ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ खाना र खाने सिक्न अमेरिकामा.
तपाईं कागजी कार्रवाई को धेरै पूरा हुनेछ. तपाईं पैसा प्राप्त गर्न को लागि यो कागजी कार्रवाई आवश्यक छ. तपाईं के राज्य बस्न आधारमा, तपाईं आफ्नो परिवारको लागि मुद्रा को एक सानो रकम प्राप्त गर्नेछ. यो शरणार्थी नगद सहायता भनिन्छ हुन सक्छ वा खाँचोमा परेका परिवार को लागि अस्थायी सहायता भनिन्छ हुन सक्छ. तपाईं शायद पनि "खाना टिकटहरु" वा SNAP भनिन्छ कुरा प्राप्त हुनेछ. यो किराना पसलहरू भुक्तानी गर्न छ. तपाईंले यो पृष्ठमा तपाईं प्राप्त हुन सक्छ लाभ बारेमा थप सिक्न सक्छौं सार्वजनिक लाभ.
आफ्नो परिवार सबैलाई चिकित्सा परीक्षा प्राप्त हुनेछ. तपाईं अमेरिका आउनुअघि तपाईं शायद एक चिकित्सा परीक्षा थियो. तपाईं र तपाईंको बच्चाहरु रोगहरु प्राप्त गर्नबाट रोक्न गर्न Vaccinations प्राप्त गर्न सक्छ. अमेरिकामा स्वास्थ्य बारेमा थप जान्न, यो भ्रमण अमेरिकी चिकित्सा प्रणाली पृष्ठ. तपाईं एक चिकित्सा समस्या छ भने, के तपाईं अमेरिकामा छन् पहिलो आठ महिनामा एक डाक्टर देख्न गर्नुपर्छ, तपाईं राम्रो चिकित्सा बीमा छ किनभने.
तपाईंको resettlement एजेन्सी र मामला प्रबन्धक तपाईं जागिर प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. शरणार्थी रूपमा, तपाईं आफ्नो पासपोर्ट मा प्रवेश टिकट देखाएर तुरुन्तै काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. अमेरिकी resettlement कार्यक्रम को लक्ष्य "आत्म-sufficiency।" हो यो बित्तिकै तपाईं रूपमा सरकार तपाईं जागिर प्राप्त गर्न चाहन्छ अर्थ. तपाईं शायद तपाईं प्रस्ताव गर्दै पहिलो काम लिन आवश्यक हुनेछ. तपाईंले यो काम गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ. यो तपाईं एक राम्रो काम को लागि देख राख्न सक्नुहुन्छ कि सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ. जागिर फेला वा राम्रो काम रही बारेमा थप जान्न, तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यारियर पृष्ठ.
तपाईं पनि एक लागि लागू गर्न सामाजिक सुरक्षा नम्बर. तपाईंको caseworker शायद तपाईं यो गर्न मद्दत गर्नेछ. यो अमेरिकामा जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ देखाउँछ कि एक नम्बर हो. जब तपाईं काम, आफ्नो पैसा केही कर रूपमा आफ्नो पे चेक र सामाजिक सुरक्षाका लागि केही बाहिर लिएको छ.
एक वर्ष पछि, एक ग्रीन कार्ड प्राप्त
पहिलो वर्ष पछि, तपाईं शायद आफ्नो मामला कामदार देखेर रोकिनेछ. तर, त्यहाँ अझै पनि अन्य संगठनहरू र मान्छे धेरै अमेरिकी तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन् भनेर हो. तपाईं आफ्नो समुदायमा कार्यक्रम फेला पार्न मद्दत गर्न आवश्यक छ भने, तपाईँले खोजी गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेटाबेस स्रोतको तपाईंको शहर.
उच्च विद्यालय समाप्त र आफ्नो GED कमाउन
आफ्नो पहिलो वर्ष पछि, अर्डर राम्रो काम प्राप्त गर्न, तपाईं पनि आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न आवश्यक, विशेष गरी यदि तपाईं आफ्नो देशमा उच्च विद्यालय समाप्त भएन. को RCO तपाईं कमाउन मद्दत गर्न निःशुल्क कार्यक्रम छ आफ्नो उच्च विद्यालय equivalency उपाधि. तपाईं बारेमा थप जान्न यो पृष्ठ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ कलेज र अन्य शैक्षिक अमेरिकामा.
तपाईं पनि अमेरिका अन्य परिवार सदस्य ल्याउन लागू गर्न सक्नुहुन्छ. सामन्यतया, तपाईं पहिलो दुई वर्ष भित्र यो लागू गर्न आवश्यक छ तपाईं अमेरिका आउन. तपाईं यो पृष्ठ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ परिवार reunification थप सिक्न वा यसको बारेमा आफ्नो caseworker कुरा गर्न.
तपाईं अमेरिका मा आफ्नो पहिलो वर्ष बारेमा थप प्रश्नहरू छन् भने, कृपया भ्रमण हाम्रो अनलाइन फोरम त्यसैले तपाईं प्रश्नहरू सोध्न सक्छौं.